Ubomi | FunDza
Undikhulisile njenge xelegu wayigcwalis’intliziyo yam ngobubi ne nzondo ndinesingqala ubudlakazile ubuntu bam undihluthela ulonwabo nezihlobo zam oko ndikuthandayo. Kanti uyintoni na ulixoki lomkhohlisi elizungulana noncumo lwam, tshini ulijijisile inxele lika faku ulibhekisa ngapha na ngapha.
Undohluthe konke endikuhloniphileyo uthando ne nkathalo zindinqabele ngenxa yakho ubomi ngaphandle komzali abuyonto. Ewe ndimthandile kaloku ubenolwa lwimi lwakhe lubetha kamnandi oko hadi phantsi komntu womngcunube kodwa kuthe kwakufika lengcuka yambethe ufele lwegusha izinto zantshintsha. Namhlanje andiyonto ndibizwa ngama gama, ixelegu? Phofu izolo besonwabile siyolelwe bobu bumnandi buchulumancisayo belilizwe lo bisi no busi. Azi kode kube nini na ndiphila okwentshontsho? Ithemba ndisenalo andizokunikela. Ukutshintsha komXhosa kukubuna kwesityalo esimiyo.
Qamata ngenelela uzukhalime kaloku uyiphuthume i-Afrika ngenene inzala yakho ibhidekile umntwana ngumntu ngomzali uthando, inkathalo, intlonipho kukutya onothi wondle ngako inzala yakho ibe ingumzali kelowo kodwa abalemihla baphila okwamantshontsho abe umntu ephantsi kwephiko lomzali. Umzali ojijisana nenzala yakhe uzitsalela nje amanzi ngomsele
Khawutsho: Ucinga ntoni ngesisincoko sikaEsihle njengokuba ephalaza imbilini yakhe?
Ohh watsho kamnandii mafaku 😥 uqamata ukhona uyjongille lentlungu , ungalahlii themba. Keep it up !! Ingakusa kude lendawo 😍😍 ndilinde eziinye ngomonde sisi ❤🍓
Tshidiii · 11 months ago